October 2018 – Yezin Agricultural University | Official Website
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၊ တတိယနှစ် (B.Agr.Sc.)သင်တန်း အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း အောက်ပါ လင့်များမှ ဒေါင်းလုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ တတိယနှစ်အောင်စာရင်း https://www.facebook.com/YezinAgriculturalUniversity
Yezin Agri. Result (Ph.D, M.Sc, M.Phil, PGD)
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် သင်ကြားပို့ချမည့် ပါရဂူ၊ မဟာသိပ္ပံ၊ စိုက်ပျိုးရေးမဟာဒဿနနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများ၏ စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်ပါသည်။ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် နေ့ရက် – ၃၁-၁၀-၂၀၁၈ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် အချိန် – နံနက် (၉း၀၀)နာရီ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့် နေရာ – ဘွဲ့နှင်းသဘင်အစည်း အဝေးခန်းမ
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်သား/သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ စာရင်းကို အောက်ပါလိပ်စာများတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://www.facebook.com/YezinAgriculturalUniversity/
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်သား/သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်တက်ရောက်ခွင့်ရ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသည် ကျောင်းအပ်မှတ်ပုံတင်မည့် အခကြေးငွေနှင့် သင်ယူရမည့် ဘာသာရပ်များစာရင်းသွင်းရက်ကို (၁၉-၁၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၂၃-၁၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်ရန်သတ်မှတ်ပြီး (၂၆-၁၁-၂၀၁၈)ရက်၊ တနင်္လာနေ့တွင် သင်ခန်းစာများ စတင်သင်ကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပထမနှစ် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုပွဲနှင့် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် နှင့် ပတ်သက်သည့် သင်ကြားရေးဆိုင်ရာများ၊ စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာများကို ပါမောက္ခချုပ်မှ (၁၉-၁၁-၂၀၁၈)ရက်၊ တနင်္လာနေ့တွင် ရှင်းလင်းပြောကြားမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် မိဘအုပ်ထိန်းသူများ ကိုယ်တိုင် မပျက်မကွက် တက်ရောက်ပါရန်တစ်ပါတည်း အသိပေး အကြောင်းကြားပါသည်။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်